Haweeney Soomaaliyeed oo ku guuleysatay bilad | Somaliska
Haweeney Soomaaliyeed oo shirkad ku leh dalka Sweden ayaa ku guuleysatay bilada [caption id="attachment_1535" align="alignright" width="300" caption="Wasiirka Ganacsiga Maud Olofsson ayaa gudoonsiisay bilada."] [/caption] Ganacsadaha Sanadka oo ay bixiso magaalada Stockholm. Ayaan Shire Jaamac ayaa ku guuleysatay bilada iyada iyo shirkadeeda Aman Care oo bixisa daryeelka dadka waaweyn. Xaflad lagu qabtay magaalada Stockholm ayaa lagu gudoonsiiyay bilada oo lagu amaal marinayay waxqabadka sareeya ee shirkada Aman Care. Shirkada ayaa adeega ku bixisa 43 luuqadood iyo 7 magaalo oo Sweden ku yaala. Ayaan ayaa isha ku haysa in ay adeega shirkadeeda gaarsiiso dalka Ingriisa.
Haweeney Soomaaliyeed oo shirkad ku leh dalka Sweden ayaa ku guuleysatay bilada
Wasiirka Ganacsiga Maud Olofsson ayaa gudoonsiisay bilada.
Ganacsadaha Sanadka oo ay bixiso magaalada Stockholm. Ayaan Shire Jaamac ayaa ku guuleysatay bilada iyada iyo shirkadeeda Aman Care oo bixisa daryeelka dadka waaweyn.
Xaflad lagu qabtay magaalada Stockholm ayaa lagu gudoonsiiyay bilada oo lagu amaal marinayay waxqabadka sareeya ee shirkada Aman Care. Shirkada ayaa adeega ku bixisa 43 luuqadood iyo 7 magaalo oo Sweden ku yaala.
Ayaan ayaa isha ku haysa in ay adeega shirkadeeda gaarsiiso dalka Ingriisa.
asc dhaman umada somaliyed waxaan urajeeynaa iney ku daydaan Ayan Shire. YADUL CULYAA KHEERUN MIN YADIL SUFLAAAA ASC